Izabelo ze-Semalt 7 Iimpawu ezigqwesileyo zesixhobo sokuCoca
Ukusebenzisa i-Data Scraping Studio, unokukhipha ulwazi kwiiwebhusayithi ozikhethayo ngaphantsi kwe 5 imizuzu. Ngokuqinisekileyo, yenye yezona zixhobo eziphambili kunye neziluncedo kakhulu zewebhu zixhobo kwi-Intanethi. I-Data Scraping Studio ine-interface enobuchule kunye nobungqina bomsebenzisi kunye neenkcukacha ze-Ajax, iisayithi ezikhuselweyo ngephasiwedi, iiwebhusayithi ezilula kunye ezinamandla, i-XML, i-JSON kunye neminye imithombo efanayo. Ezinye zezinto ezimangalisayo zikhankanywe ngezantsi.
1. Usesho olungundoqo lwegama elingundoqo:
Njengazo zonke ezinye izidumbu ezidumile, iDraw Scraping Studio inikeza indlela engcono yokukhangela amagama angundoqo. Umele ulande kwaye usebenzise le sixhobo kwaye uyisebenzise ukuhlela idatha yakho ngokusekelwe kumagama akho angundoqo. Ivelisa ezininzi zamagama kunye neengqungquthela ukufumana ugqozi. Ngaloo ndlela, akugcini nje ukukrapha idatha yakho kodwa ibuye iluhlele ngokusekelwe kumsila wakho omfutshane kunye nemigca yamagama emide.
2. Uphando lweMakethe:
Idatha yeSraft Studio iyona kuphela i-scraper eyenza ukukhangela kwiimarike ezifanelekileyo kubasebenzisi bayo. Ngokungafani nezinye iziqhelo eziqhelekileyo zedatha , esi sixhobo sinikezela ngemiphumo esemgangathweni esekelwe kukukhangela kwakho. Ngaloo ndlela, kufezekisile abathengisi, abaphandi be-intanethi, abafundi, intatheli kunye nabaphengululi.
3. Ukuhlanganiswa kwedatha yeWebhu:
Isizathu esihle sokusebenzisa i-Data Scraping Studio kukuba sinika iinketho ezinobuncedo bokuhlanganiswa kwedatha yewebhu. Iyahambelana nazo zonke iiphequluli zewebhu kunye neenkqubo zokusebenza, okwenza kube lula kuwe ukuba ulandele idatha yakho kwaye udibanise njengeminqweno yakho.
4. Ukuqhathaniswa kwedatha
Nangona i-scrapers yedatha engaphezulu ayikwazi ukuthelekisa idatha yeebhsayithi ezimbini okanye ngaphezulu. Ngombulelo, iDraw Scraping Studio inalo khetho kwaye ikuvumela ukuba uhlalutye idatha yeewebhu ezahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba ufumene iziphumo eziphezulu. Ngaphezu koko, esi sixhobo sihlela idatha encinane, sisuse zonke iiposiso zesipelingi kunye negrama ukusuka kwiziphumo zakho.
5. Uqwalasela umgangatho:
Le nkqubo ihlola umgangatho wedatha yakho ngelixa ikhutshwe. Kuthetha ukuba awudingi ukugcina iliso kwi-extraction njengoko esi sixhobo sizakukufumana ngokuzenzekelayo ukuba ufundeke kwaye uhlaziywe kwedatha kwifomathi oyintandokazi.
6. Iiprofayili / Iinkcukacha zeMveliso enikezelweyo:
Abasebenzisi beli software bafumana ukufikelela okulula kwiiprofayili kunye neenkcukacha zomkhiqizo. Kuthetha ukuba usebenzisa i-Data Scraping Studio kwi-website yakho ye-e-commerce, unokufumana ulwazi kwii-giants ezifana ne-Amazon ne-eBay ngaphandle kokunciphisa umgangatho. Unokuzama le sixhobo ukufumana iinkcukacha zemveliso, uluhlu lwamagama abo, iinkcazelo zabo kunye nemifanekiso. Ngaloo ndlela, sinokuthi iData Scraping Studio yindlela ehle kakhulu kwi-Amazon Scraper ne-Facebook Data Extractor.
Abasebenzisi abahlukahlukeneyo bayakhalaza ngokungabikho kwezixwayiso zomsebenzi wokuqhawula. Ngokungafani nezixhobo eziqhelekileyo, iDraw Scraping Studio iza kukuphawula xa idatha ichithwe. Udinga ukulungelelanisa izicwangciso zalo kwaye uqale ukufumana izaziso ngqo kwibhokisi lakho lebhokisi. Unokufumana isaziso sakho kwisithuthi usebenzisa okukhethiweyo. Ngaloo ndlela, iDraw Scraping Studio yi-software epheleleyo ejolise ukwenza inkqubo yakho yokukhipha idatha ikhululeke kwaye ilula. Into ephambili kukuba iphuma ngeendleko Source .